5 barnaamij oo aan lagu waayi karin iPhone-kaaga xagaagan 2015 | Wararka IPhone
Nacho | | Barnaamijyada IPhone
In kasta oo ay weli jirto wakhti si rasmi ah loo soo dhoweeyo xagaaga, cimilo wanaagsan ayaa soo ifbaxaysa waana fikrad wanaagsan in loo diyaar garoobo xilliga ugu kulul iyadoo 5 barnaamij oo muhiim u ah xagaaga 2015.
Hoos waxaad ka heli doontaa wax yar isku duwidda barnaamijyada loogu talagalay iPhone taasi waxay kaa dhigeysaa inaad rabto inaad u qaadato tuwaalka iyo shaashadda qorraxda barkadda.
5 Halkan Khariidadaha
Shaqada guriga diyaarso shandadaha Had iyo jeer waa mid caajis ah oo xitaa haddii aan sameyno liistada dhammaan waxyaabaha aan u qaadan doonno fasax, marwalba waan ilaawnaa wax. Waad ku mahadsantahay barnaamijka Packpoint, waxaad abaabuli kartaa safarkaaga ugu badnaan oo waxaad sameyn kartaa liistada otomaatiga ah ee waxyaabaha ay tahay inaad qaadato, howlaha aad qorsheysey inaad sameyso iyo waxyaabo taxane ah oo lagu daro si ay wax waliba ugu socdaan sidii aad ugu talo gashay.
Markaan bilaabayno Xidhmada, codsigu wuxuu na weydiin doonaa su'aalo taxane ah oo iyaga ka mid ah, wuxuu soo saari doonaa liis ay ku qoran yihiin walxaha aanan ilaabi karin meesha aan u socono, oo ay ku jirto dalladda haddii ay dhacdo inaad nasiib xun ku yeelato inuu roob kugu soo da'o xilliyada ciidaha.
PackPoint, baakadaha safarkafree
Waxay u badan tahay in haddii aad u safreyso xeebta, codsiga'PPPoint 'uu ku sheegay flip-flops inuu yahay cunsur muhiim u ah shandadahaaga. Haddii aad rabto inaad ka cusboonaysiiso taada si raaxo leh iPhone-ka, hadda waad sameyn kartaa adigoo mahadsan Havaianas app rasmi ah.
Codsigan waxaad ku heli kartaa a buugga in ka badan 400 oo moodal oo ah flip flops si aad u iibsan kartid kuwa aad ugu jeceshahay oo si toos ah guriga loogu diro ama haddii aad doorbideyso, raadi dukaanka Havaianas ee u dhow goobtaada si aad ugu tijaabiso halkaas.
Haddii ay dhacdo in nooca 'Havaianas flip-flop' uu ka dhammaado keydka, dalabka ayaa kuu soo diri doonta ogeysiin marka mar labaad la heli karo, raaxo badan macquul maaha.
Ugu dambeyntii, codsigu wuu awoodaa iskaan boodhka sheyga Havaianas inay isla markiiba ku siiso dhammaan macluumaadkooda.
IPhone-ka ayaa noqday kaamirada is haysta oo si joogto ah noo wehelisa sidaas darteed, fasaxa waxaan si xoogan u xoojineynaa isticmaalkiisa. Haddii arjiga ay ku jirto macruufka uu gaabiyo oo aad rabto inaad ku raaxeysato xulashooyinka sida miirayaasha, kontaroolada gacanta iyo astaamaha kale si loo hagaajiyo sawirradaada, VSCO Cam waa codsi muhiim u ah xagaagan.
En barnaamijyada sawir qaadista waxaa jira fursado badan oo kala duwan sidaa darteed maahan inaan ku koobnaano isticmaalka xulashadan midkoodna, waxaa jira qaabab kale oo badan oo isla siman oo sax ah sida Camera +, tusaale ahaan.
VSCO: Tifatiraha Sawirka & Fiidiyowgafree
Muusiggu waa mid kale oo ka mid ah farxadaha fasaxa xagaaga iyo epicast wuxuu kuu keenayaa saacado aan kala go 'lahayn oo ah nooca aad ugu jeceshahay mahadsanid adeegga qulqulka boqolaal idaacadood oo aad isla markiiba aad kuheli doonto mahadsanid codsigan.
Isku xirka codsigan ayaa si taxaddar leh loo qaabeeyey inkasta oo uu hadda ku qoran yahay Ingiriis, waxay u muuqataa in tarjumaadda Isbaanishku ay ku jirto liiska wararka mustaqbalka. Xitaa sidaas oo ay tahay, marinka loo maro barnaamijka waa mid aad u macquul ah caqabadna ku noqon maayo sidaa darteed ilbidhiqsiyo gudahood ayaan ku raaxeysaneynaa idaacadaha internetka ugu fiican.
Haa, horey ayaan u haysanay Google ama Khariidadaha Apple si aan u gaarno meesha la doonayo, laakiin maxaa dhacaya haddii aan u safrayno meel aanan lahayn caymis ama aan dhalaalno heerka xogta? Xaaladdaas, waxaa lagugula talinayaa inaad taxaddar iyo ha la soo dejiyo khariidadaha aagga taas oo aan u safreyno, sidaa darteed waxaa laga heli karaa khadka toosan markasta oo aan rabno.
Halkan sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale oo taxane ah sida helitaanka jidadka gaadiidka dadweynaha, marin-u-jeedin socodka ama macluumaadka taraafikada ee waqtiga dhabta ah. Dabcan, waa gebi ahaanba bilaash.
HALKAN Khariidadaha WeGo iyo Navigationfree
Waxaan sameyn karnaa liis aad u tiro badan oo ah waa inuu lahaadaa barnaamijyo xagaaga Laakiin liistadeena ugu horreysa waxaa ka mid ah shantaan barnaamij oo ka dhigi doona fasaxyadeenna kuwo aad u raaxo badan annaga iyo iPhone-keena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » 5 barnaamij oo aan lagu waayi karin iPhone-kaaga xagaagan 2015
Qufulka isku dhafka; dhigay ammaan ah sida aad iPhone qufulka screen